Mbappé hooyadiis oo ka hadashay arinta ku saabsan heshiis kordhinta wiilkeeda ee kooxda Paris Saint-Germain – Gool FM
Mbappé hooyadiis oo ka hadashay arinta ku saabsan heshiis kordhinta wiilkeeda ee kooxda Paris Saint-Germain
Dajiye October 6, 2021
(Paris) 06 Okt 2021. Fayza Lamari, oo ah hooyada xiddiga caanka ah ee reer France Kylian Mbappé, ayaa sheegtay in wadahadalada lagu cusboonaysiinayo heshiiska uu kula jiro Paris Saint-Germain ay meel fiican marayaan, taas oo ka soo horjeedda wixii uu laacibku sameeyay dhawaan sidoo kalena lid ku ah warar badan oo xaqiijinaya inuu ku biirayo Real Madrid.
Fayza Lamari ayaa wareysi ay siisay “Le Parisien” waxay ku xaqiijisay inay wali ka wada xaajoonayaan heshiis kordhinta Kylian Mbappé ee kooxda Paris Saint-Germain.
Mbappé hooyadiis ayaa wareysi ay bixisay waxay ku sheegtay:
“Waxaan hadda kala hadleynaa Paris Saint-Germain arrinta ku saabsan heshiis kordhinta wax walbana si fiican ayey u socdaan, waxaana laga yaabaa inaan xal u helno, waxa la hubo ayaa ah inuu sameyn doono intii karaankiisa ah si uu ugula guuleysto koobka Champions League Paris.”
“Kylian waa inuu qancaa, haddii uusan ku faraxsanayn wuxuu ka tagi doonaa waxaas oo dhan.. Mbappé wax walba waa iska beddeli karaan maskaxdiisuna hal habeen ayay is -beddeli doontaa.”
Dhankeeda, Paris Saint-Germain ayaa weli aad u rajaynaysa inay ku qanciso Mbappe inuu la sii joogo, inkastoo ciyaaryahanka uu codsaday inuu baxo, isla markaana uu ku adkeysano inuusan heshiiska kordhinin.
Gary Lineker oo wareysi uu siiyay MARCA ku kala doortay Ronaldo iyo Messi isagoo raaciyay sababta
Belgium vs France: Horudhaca kulanka afar-dhammaadka UEFA Nations League... (Sidee ayay labadan xul kusoo gaareen heerkan?)